Radio Don Bosco - Tonga izahay mba hitsaoka ny Mpanjaka
Naseho ny : 3 janoary 2021
Mankalaza ny Epifania ny Eglizy amin’izao Alahady izao, na ny fisehoan’i Jesoa Zazakely tamin’ireo Majy izay tonga hitsaoka Azy.
Rehefa nambaran’ireo Majy tamin’i Herôda mpanjaka fa misy mpanjaka vao teraka ao Betilehema dia natahotra izy satria ho very ny fahefany ary nandray izany ho mpifaninana aminy, izany hoe fahavalo. I Jesoa anefa tonga teto an-tany tsy tahaka ny mpanjaka mihitsy, satria Izy àry, tsy mba teraka tao anaty Rova sy tao anatin’ny harena. Fa tonga Izy tao anatin’ny fahantrana ary fahefan’Andriamanitra no entiny fa tsy an’olombelona.
Ireto Majy ireto izay avy amin’ny tany tsy mpino dia nahalala tamin’ny fahaizany fa mpanjaka i Jesoa. Tsy nahasakana azy ireo tsy hitsaoka Azy sy tsy hanome fanatitra ho Azy ny fahantrana izay hitan’izy ireo tamin’ilay zaza vao teraka. Tanteraka tokoa eto ny voalazan’i Izaia mpaminany fa hanatitra volamena sy emboka ny Tompo ny tatsinanana ary mbola hitsaoka Azy. Nahafaly azy ireo tokoa ny nahita an’ilay Zazakely, mpanjakan’ny hafaliana sy ny fiadanana.
Ny Evanjely anio àry dia manasa antsika mba hiaiky fa i Jesoa no Mesia, tahaka ireto Majy izay avy any amin’ny tany tsy mpino ireto. Toetra tsara azo alain-tahaka amin’izy ireo ny fikelezana aina amin’ny fitadiavana an’i Jesoa. Tsy mba kivy ny nandeha sy ny nanontany izay nisy azy. Rehefa tsy mahita an’i Jesoa isika dia tsy mahita ny fiainana ihany koa satria Izy irery ihany no Mpamonjy. Ny mahita an’i Jesoa dia ny mahita ny lalana mitondra antsika any amin’ny fahamarinana izay manome ny fiainana.